Hotera Musika Kudzoreredza: Tarisa kuGerman, Spain uye Greece
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau dzeEurope » Hotera Musika Kudzoreredza: Tarisa kuGerman, Spain uye Greece
Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Germany Kuputsa Nhau • Greece Kupwanya Nhau • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • nhau • Kuvakazve • Resorts • Spain Kuputsa Nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now
Mitengo yehotera yakaramba yakaramba isina kuchinja panguva yedambudziko re COVID-19, uye nyanzvi dzeindasitiri dziri kutarisira kupora kuzere kwemusika wepasi rose wehotera na2024.
Nevashandisi vazhinji vemahotera vakadzokororazve mazwi emaroja, kurasikirwa kukuru kwakadzivirirwa mumisika mizhinji.
Ongororo yakaitwa naTranio inojekesa kuvandudza chikamu.
MunaAugust 2021, Tranio vakabatana neInternational Hotel Investment Forum (IHIF) kuitisa ongororo yakabatana nezvekukanganiswa kwedenda repasi rose re COVID-19 pabazi rekugamuchira vaenzi kubva munaKurume 2020, uye kusvika zero pane izvo zvatinogona kutarisira kubva kumusika kuenda kumberi.
Ongororo iyi yakaratidza zvinopfuura zana nemakumi matanhatu emaindasitiri nyanzvi kubva kuEurope nemibvunzo yakanangana nekugadzira nzwisiso yenzara, manzwiro uye zvimwe zvinhu zvinotsigira kudyara kwezvivakwa zvepasi rose kubva pakatanga denda iri.
Vazhinji vevatori vechikamu veongororo (59%) vaive vezvivakwa kana vashandi vekugamuchira vaeni, 16% vaive vanoshanda muhotera, 13% vakazvizivisa sevatengesi. Chikamu che 'Vamwe' (12%) chaive nevamwe vemaindasitiri, vakadai sevanopa mazano ekudyara, mapurofesa eyunivhesiti nevatori venhau.
Ongororo iyi yakaratidza kuti nyanzvi zhinji dzinotarisira kuti indasitiri yekugamuchira vaenzi ichapora mumakore matatu anotevera, kunyangwe mamiriro ezvinhu mune dzimwe nyika anoenderana nemitero yekubaiwa. Vakapindura vainzwa zvakanyanya kuti misika yeGerman, yeSpanish neyechiGreek yaizoratidza kuwedzera kunaka kupfuura vamwe maererano nekukurumidza kupora. Uye zvakare, nuances mumhinduro dzevakapindura inojekesa bhegi rakasanganiswa remafungiro parizvino ari pamusika.
Mu United States 21 kunze kwe25 misika yehotera iri mukutendeuka.
52% vanotenda kuti musika wehotera uchapora muna 2024
Ruzhinji rwevakabvunzwa vakaratidza kutenda kwekuti musika wekugamuchira vaeni uchapora kusvika kumatambudziko epamberi pemakore matatu. Vanopfuura hafu - 52% - yevatori vechikamu vanofungidzira kudzokera kuchinyakare muna 2024, nepo vamwe makumi matatu nevaviri vane tarisiro yekuti zvinhu zvichadzokera kumatanho epamberi pehosha na32.
Vasingasvike pa7% vanotarisira kupora kuzere muna 2022. Mumwe anopindura akadaro, Alexander Schneider anobva kuNikki Beach Hotels uye Resorts, anotarisira kuti musika wezororo uchave nerimwe ramakore aro akasimba kwazvo muna 2022. Asi vamwe vanochenjerera mune zvavanofungidzira. Mumwe akapindura uyo asina kuzivisa zita ravo akafunga kuti mahotera munzvimbo dzakakura dzekushanya anongodzoka chete kana mitengo ikakwira uye mhando dzekushanduka dzikachinja.
Sezvineiwo, vanoshanda muhotera vakaita kunge vane tarisiro huru: 44% yakakamurwa pakati pekutarisira kwekuzara zvizere muna 2023 kana 2024, nepo 6% yakanhonga 2022 segore zvinhu pazodzokera zvakajairika. Vashandi, kune rumwe rutivi, vakanga vakangwarira. Vazhinji vevatengesi (87%) vanotarisira kupora mumakore matatu anotevera uye hapana anotenda kuti zvinogona kuitika muna 2022.
Pakati pevashandi vezvivakwa uye zvekugamuchira vaeni, 51% vanotarisira kuti musika unozopora muna 2024, nepo 35% vachifunga kuti zvichaitika nguva pfupi yapfuura, muna 2023. Vanenge 5% vanotarisira kuti musika udzokere pane zvakajairika muna 2022, nepo vamwe 5% vachifunga zvichaitika pakati pa2026 na2030.
Kunyangwe vazhinji varimari vasingatarisiri kupora nekukurumidza, vazhinji vacho vane tarisiro nezve chikamu chehotera mumakore anotevera - chiitiko chinonyatsoratidzwa neHospitality Insights ripoti kwekota yechipiri ya2021. 85% yevatengesi, maererano neshumo, vakaratidza tarisiro yakanaka yekudyara kweindasitiri yehotera, nepo 13% vasina kwavakarerekera uye 2% chete vaive vasina tariro. Hospitality Insights yanga ichitarisa mutengi nemanzwiro evatengesi muchikamu chehotera kubva pakatanga denda iri. Mahotera anobata pamusoro pechinyorwa chekota yechitatu yakateedzana seyakanakisa mukana wekudyara pamusoro pemwedzi gumi nembiri inotevera, ichiteverwa nedzimba dzinoshandirwa uye nzvimbo dzekutandarira.
Nyanzvi dzinotenda kuti Germany neSpain ichaona kukurumidza kupora mubhizinesi rehotera
Vanopfuura chetatu (35%) vevakabvunzwa vanotenda kuti musika weGerman unodzoka nekukurumidza kupfuura vamwe. Vamwe makumi matatu% vanotenda kuti musika weSpanish unozopora nekukurumidza.
Pakati pevashandisi vehotera, 31% vakasarudza Germany, uye 25% imwe neimwe yakanongedzera kuGirisi, Itari neSpain. Kupfuura kota, 27% yezvivakwa kana vashandi vekugamuchira vaeni vanofunga kuti Girisi ndiyo ichakurumidza kupora asi ruzhinji rwakavhotera Germany neSpain.
Vanopfuura zvikamu zviviri kubva muzvitatu zvevarimi - 69% - vakaratidza kuvimba kwakanyanya mumusika weUK, vamwe vese vachinongedzera kuGerman neGreek. Sekureva kweshumo razvino re STR, iyo UK yekugamuchira vaenzi chikamu chinoratidza yakanyanya kudzoreredza mwero muEurope, inotungamirwa nezororo rekuzorora mahotera.
Vamwe vevakabvunzwa, vakasarudza "vamwe," vakataurwa mune zvakataurwa United States, Asia muuzhinji, uye Turkey neChina kunyanya. Kirk Pankey, Mutungamiri uye Mutungamiriri Mukuru kuLagundi Hospitality, vakafunga kuti nyika dzakabaiwa majekiseni zvakanyanya dzinogona kupora nekukurumidza pamusika.
Mitengo yehotera yakaramba yakaramba isina kuchinja
Mitengo yekutenga emahotera yakaramba isina kuchinjika kana kudonha ne5% kana zvishoma, zvinoenderana nevazhinji (78.6%) yevakapindura.
Panyaya yekuchinja kwemutengo, maonero emapoka akaongororwa anosiyana. Vashandi vemuhotera vaive neboka rakanyanya kusava netariro, paine 44% chete vachisarudza kuti mitengo haina kunge yashanduka kana kudonha kusvika pa5%. Zvichakadaro, 38% yevanoshanda vanotenda kuti mitengo yadonha neinopfuura 15% kana kunyange 20%. Panguva imwecheteyo, 85% yezvivakwa kana vashandi vekugamuchira vaeni uye makumi masere nemasere evarairidzi vane maonero ekuti mitengo haina kuchinja kana kudonha neimwe 81%.
Iyo yakawanda data yakawanikwa muvhoti yakatsigirwa naTranio maneja wepamberi George Kachmazov, uyo akasimbisa kuti hazviite parizvino kutenga mhando dzemahotera munzvimbo dzakanaka nemitengo yakaderera, kunyangwe paine dambudziko riri kuitika mumusika.
“Kune vatyairi vakati wandei vanokanganisa mitengo: Mari mumusika iri kure nemachati nenzira yakatambanuka, semhedzisiro yemitemo yenyika. Mabhangi, kureva varidzi vezvikwereti zvakachengetedzwa nehotera zvivakwa, vakavimbika kuvaridzi vedzimba. Ivo vanowanzo dzivisa kutora chibatiso, uku vachipawo kudzoserwa kwechikwereti. Kazhinji, kuti utenge imba yehotera nhasi pane chakasimba dhisikaundi (ine mambure ekuvandudza goho re6% kana kupfuura), munhu anofanirwa kutarisa mapurojekiti munzvimbo dzisiri-dzakakodzera, kwete dzehukuru hwemasangano kana kuda kugadziridzwa. Zvakare, zvivakwa zvine mugove wakakura weMICE mari zvino zvinogona kutengwa pamutero unopfuura 10-20% kubva pamitengo yekutengesa isati yatengeswa. Kune zvivakwa zvakakura munzvimbo dzakakwirira zviri mumamiriro akanaka, yakaderera mutengo iyo munhu yaanogona kuwana panguva ino ndeye 5-7%, sekufungidzira kwedu, "Kachmazov akadaro.
Vamwe vakapindura vakaratidza kuti kune mukana wakakura wekubvunza-kubvunza pamitengo yehotera. “Kurumura varidzi kubva parutsigiro rwese rwehurumende kuchagadzira kuwanda kwemari pamwe nekurwadziwa kunouya kuburikidza nebazi. Musika wekutengesa uchiri mumifananidzo yakamiswa, ”akadaro mumwe wevatengesi.
Vazhinji vanoshanda muhotera vakaferefetwa vakati vakadzokororazve matareti avo emaroja
Iyi ongororo inoburitsawo pachena kuti vafambisi vakapindura sei denda iri. Vazhinji veavo vakapinda muongororo (70%) vakaratidza kuti vashandisi vakadzokororazve mazwi emaroja. Vashandisi ivo pachavo vakasarudza iyi sarudzo mune angangoita 59% emakesi, zvinoenderana nemhinduro dzedu. Kune vatengesi, iyo nhamba yaive 63% uye yevashandi vezvivakwa, yaive 74%.
Mhedzisiro yemhinduro yekuti 'Havana kubhadhara rendi' inosiyana nechinenge chinhu cheviri: vanoshanda pachavo vakasarudza iyi mhinduro mune gumi nematatu chete emakesi, nepo varimari nevashandi vezvivakwa vakapa iyi mhinduro mu13% uye 26% yematambudziko, zvichiteerana. .
Mhinduro dzakakurumbira dzevashandisi panguva yedenda dzakachinjirwa kuzvibvumirano zvehybrid uye zvibvumirano zvevatariri nevaridzi, ne34% uye 9% yevose vakapindura vachipa mhinduro idzi, zvichiteerana. Panguva imwecheteyo, vashandisi pachavo vakasarudza idzi sarudzo mu18% chete (chinja kuzvibvumirano zvehybrid) uye 5% (chibvumirano chekutonga) chematambudziko.
Mahotera mazhinji akashandura kuenda pakati nepakati-refu marezi panguva yedenda
Inenge hafu, kana 41%, yevakabvunzwa vanotenda kuti akawanda mahotera akauya kuzofarira mareji epakati nepakati-refu panguva yedenda. Uye zvakare, 32% yeaya nyanzvi akatenda kuti mahotera mazhinji akashandurwa kuita nzvimbo yekushanda, uye 17%, kuti vakavhura makicheni emweya kana zvitoro zvine rima.
"Shanduko huru yekubuda mudenda kwave kusimuka kwekugara kwenguva refu nemaketani makuru achibvisa zvipo zvavo kuti vagare kwenguva yakareba vashanyi," akadaro mumwe wevakapinda muongororo.
10.2% chete vakaongorora kuti mahotera mazhinji akange achinjwa kuita dzimba dzekurega basa, kunyangwe hazvo zvichikura kudiwa kwevakuru dzimba. Sekureva kwenyanzvi dzeTranio, kushandura mahotera kuita dzimba dzekurega basa hazviwanzo kuitika nekuda kwekusiyana kwehunyanzvi zvinodiwa kana nzvimbo dzisina kukodzera.
Vamwe vevashandi vezvivakwa kana zvekugamuchira vaeni pakati pevakatipindura vakataura kuti mahotera akachinjira kumisha isina pekugara, akapa pekugara kune vashandi vehutano kana kuvhura nzvimbo dzekuyedza dzeCOVID. "Mahotera mazhinji akaramba akavharwa, uye vashoma chete ndivo vakapa rubatsiro rweveruzhinji," akadaro Joan E. Capella, Director M&A weIberolat Consulting & Investment.
Kuvandudzwa kwemajekiseni ekudhiraivha kuchaendesa kupora kwemusika wehotera
Vakabvunzwa zvavaifunga kuti zvaizotungamira kupora-denda. Kunyangwe paine mhinduro dzinoverengeka dzinogona kuitika kumubvunzo uyu, 71% yevakabvunzurudzwa vakapokana kuti majekiseni ekudzivirira zvirwere ndiwo anonyanya kukosha. Rumutsiriro rwekushanya kwenyika dzese uye hupfumi hwepasirese yaive mhinduro dzinotevera dzakakurumbira, kuverenga 58% uye 46%, zvichiteerana. Uye zvakare, 23% vanotenda kuti musika wehotera unowana kukurudzira kubva pakutangazve kuratidzira uye zviitiko zvebhizinesi. Imwe yenyanzvi idzi yakataura kuti kushanya kwebhizinesi kuchazongodzoka "kana zvirambidzo zvekufamba zvabviswa uye kana huwandu hwevanhu vakabayiwa jekiseni hwapfuura 80%."
Mumwe wevakabvunzurudzwa akataura nezvetekinoroji isingabati uye AI senge pakati pezvishandiso zvinogona kushandura 'yekushanya uye yekugamuchira vaenzi pfungwa yezvinhu'.
Vamwe vatori vechikamu vakaratidza kuti rutsigiro rwehurumende, kunyanya muIreland neSlovenia, rwakabatsira chikamu chevaeni kurarama munguva dzakaoma. Mumiriri weSlovenia real estate agency Investmond akataura kuti muSlovenia vagari vakagashira makuponi ehurumende anotendera emahotera emuno kuzara zana. "Musika wezvivakwa muSlovenia wakaona mitengo ichikwira ne100% kubva munaNdira kusvika Nyamavhuvhu 40," vakadaro.
"Semaonero angu, pamusoro pezve kusimukira kwehupfumi, kuwedzera kushanya kwenyika munyika dzakabatana kuchabatsira kukurumidza kudzora musika wehotera kubva 2022," akadaro Detlef Lauterbach anobva kuDELA.
Isu kuTranio tinotarisira zvakare kudzoreredzwa kwebhizinesi rehotera uye tiri kutsvaga mukana wekutenga mahotera madiki anoda kugadziridzwa nemutero uye kuvagadzirira iyo nguva yekudzoserwa kwemusika - kugadzirisa, kukwidziridzira uye kugadzirisa mabasa.